ဇာတိပကတိအတိုင်း စီရင်ကြလော့။ ငါသည်လူကိုမစီရင်။ (TEDIM CHIN) - pathianhmangaihna-chin.com
Posted May 16, 2022 nen Danutasn Brown A chhungah TEDIM CHIN
ဘုရားသခင်သည် အလျင်အမြန် တရားစီရင်ခြင်းမဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောစကားကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသော သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံ ဒီနေ့ ဒီစာကိုရေးခဲ့တယ်။ ဤရိုးရှင်းသော နိဒါန်းသည် အခြားသူများကို ကူညီနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်၊၊
ထာဝရဘုရား၌ တရားစီရင်ခြင်းအမှုမရှိလျင်၊ တရားသောအမှုနှင့်တရားစီရင်ရသောနေ့ကြီးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။ မိမိတို့နှစ်သက်သလိုကျူးလွန်ကြသော်လည်း၊ကိုယ်တော်သည်ထိုသို့သောဘုရားမဟုတ်။
အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ စစ်ကြောစီရင်တော်မမူ။
ဇာတိပကတိအတိုင်း စီရင်ကြလော့။ ငါသည်လူကိုမစီရင်။ ယော ၈:၁၅
အကြောင်းမူကား၊ လောကီသားတို့ကို တရားစီရင်ခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မမူ။ ထိုသူအားဖြင့် လောကီသားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း၊
ထို့ကြောင့် အဓိကအချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်လိုကြောင်း တရားစီရင်ခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရန် မထိုက်တန်ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသောလူ မရှိပါ။ လူသားတိုင်းအား ကိုယ်တော်ပေးတော်မူသော ဆေးကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံမည်လောဟူမူကား၊၊
ထိုအခါ ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့က ရဲရင့်စွာပြော ဆိုသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သင်တို့အား ရှေးဦးစွာ ဟောရမည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်တို့ထံမှ ထား၍ ထာဝရအသက်နှင့် မထိုက်တန်ဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် စစ်ကြောစီရင်လျက်၊ ငါတို့သည် တပါးအမျိုးသားတို့ထံသို့ လှည့်လည်‌ဟောပြောကြ၏၊၊ တမန်တော် ၁၃:၄၆
ထို့ကြောင့် ယုဒလူတို့သည် “ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်” ကို သူတို့နှင့်ဝေးရာသို့ တွန်းပို့ကာ “မိမိကိုယ်ကို မထိုက်တန်ဟု ဆုံးဖြတ်” ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူနှင့်အတူနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ မနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခု ပေးထားသည်။ သူသည် ငါတို့ကိုလက်ထပ်ချင်သည်၊ ငါတို့နှင့်အတူနေထိုင်ချင်သည်။ ထိုသဘောဖြင့် သူသည် မည်သူ့ကိုမျှ အကဲမဖြတ်ဘဲ၊ သူသည် လူသားအားလုံးနှင့် အတူနေရန် ပျော်ရွှင်သည်။
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘ၏ သားသမီးများဖြစ်ကြမည်အကြောင်း၊ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် မကောင်းသော သူများအပေါ်၌ ထမြောက်စေ၍၊ တရားသောသူနှင့် မတရားသော သူတို့အပေါ်သို့ မခွဲခြားပဲတန်းတူစီရင်တော်မူ၏။
သို့သော် လူသားများသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ရှာဖွေပြီး ယေရှုကို လက်ခံမည်ကို မရွေးချယ်ရန် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့် အချိန်ကာလသည် ကုန်ဆုံးလာလေပြီ။ သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သေရလိမ့်မည်။ အဲဒါ ငါတို့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားစီရင်ခြင်းကို လေးစားမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ငါတို့ကို တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။
မည်ကဲ့သို့ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်းဟူမူကား၊ မည်ကဲ့သို့ အတိုင်းအတာဖြင့် တိုင်းတာရမည်နည်း၊၊ မဿဲ ၇:၂
S. Barich • May 17, 2022 • 79 Tawknate ဇာတိပကတိအတိုင်း စီရင်ကြလော့။ ငါသည်လူကိုမစီရင်။ (TEDIM CHIN)
D. Brown • May 16, 2022 • 914 Tawknate Kum Tul Thu (Mangmuhna 20)
K. Pau • Feb 07, 2022 • 160 Tawknate Tuuno Mopawi Kum 1000 Thu (Mangmuhna 19)
K. Pau • Feb 07, 2022 • 168 Tawknate (TEDIM) Hih in Pasian heh na ahi hiam?
J. Schulberg • Feb 04, 2022 • 162 Tawknate (TEDIM) "Zesuh in ankhempeuh siang mah hi cihi lo hiam?" Mark…
K. Mullins • Jan 02, 2022 • 202 Tawknate Bang hang in Pasian in asia ka tunsakding pan in ka kisik kik…
D. Brown • Oct 09, 2021 • 272 Tawknate (TEDIM CHIN) "Zesuh in ankhempeuh siang mah hi cihi lo hiam?"…
K. Mullins • Oct 08, 2021 • 283 Tawknate (TEDIM CHIN) Pasian' hehna icih in bang hiam? Mangmuhna 6:14-17.
K. Mullins • Oct 08, 2021 • 295 Tawknate (TEDIM CHIN) Pasian inasia (gitlohna) abawl hiam? Isaiah 45:7.
K. Mullins • Sep 22, 2021 • 299 Tawknate
D. Brown • May 16, 2022 • 914 Tawknate Pathian Chu Chhiahhlawh A Ni, Bawih Pu Ani Lo
J. Schulberg • Jul 12, 2020 • 865 Tawknate I vengte hmangaih rawh
Sanga • May 08, 2021 • 526 Tawknate Ka thian chibai le
Sanga • Jul 01, 2021 • 401 Tawknate Nga ti nge Pathianin Adama chu tui takaamut hilh tir a, a…
A. Ebens • Aug 07, 2021 • 337 Tawknate (TEDIM CHIN) Sabbath pen Israel mite leh Egypt panaapaikhia…
K. Mullins • Sep 16, 2021 • 321 Tawknate (TEDIM CHIN) Paul in Ni khat peupeuhaSiangthoatanpen bangmah…
K. Mullins • Sep 17, 2021 • 312 Tawknate (TEDIM CHIN) Pasian inasia (gitlohna) abawl hiam? Isaiah 45:7.
K. Mullins • Sep 22, 2021 • 299 Tawknate (TEDIM CHIN) Pasian' hehna icih in bang hiam? Mangmuhna 6:14-17.
K. Mullins • Oct 08, 2021 • 295 Tawknate Darkar khat tal Kross en dun I la
A. Ebens • Sep 15, 2021 • 292 Tawknate (TEDIM CHIN) "Zesuh in ankhempeuh siang mah hi cihi lo hiam?"…
K. Mullins • Oct 08, 2021 • 283 Tawknate Bang hang in Pasian in asia ka tunsakding pan in ka kisik kik…
D. Brown • Oct 09, 2021 • 272 Tawknate (TEDIM) "Zesuh in ankhempeuh siang mah hi cihi lo hiam?" Mark…
K. Mullins • Jan 02, 2022 • 202 Tawknate Tuuno Mopawi Kum 1000 Thu (Mangmuhna 19)
J. Schulberg • Feb 04, 2022 • 162 Tawknate